Idiki yemaguta ekuvakwa - iyo yazvino City Fomu Rokugadzira maitiro uye zvigadzirwa
Zvivakwa zvidiki Iboka rezvivakwa zvidiki izvo zvinokanganisa zvakanyanya maonero epadenga nevashandisi vayo.
Iko kuburikidza nekushandiswa kwezvinhu zvakasarudzika zvakasarudzika zvidiki zvekuvakwa izvo nzvimbo yakavakirwa inotora pane hunhu, kutaura uye, pamusoro pezvose, inova inoshanda.
Fenicha yemumugwagwa inokanganisa nzvimbo yakatenderedza, pamwe chete nezvinomera uye zvivakwa, zvichikonzera kusikwa Spatial Order.
Zvivakwa zvidiki zvemadhorobha zvinova izvo zvinosiyanisa maguta.
Padivi pane chinonyanya kuratidza chinhu, chivakwa kana nzvimbo, yakanyatsogadzirwa diki yekuvaka inogona kuva izvo zvichayeukwa zvakanyanya nevashanyi.
Ichabatanidzwa neguta rakapihwa. Izvo zvichavasiyanisa pane yenyika uye yepasi rose nhanho.
Nhasi, kutungamira, metropolises emazuva ano anokwikwidzana nemumwe uye anonzi anonyanya kukwezva kwete chete kune vashanyi, asiwo kune vagari, avo chimiro chemagariro neveruzhinji pasina mubvunzo chakakosha.
Yakagadzirwa Zvakanaka mabhenji, sheds, tafura, maruva mapoto uye zvinhu nzvimbo dzekutamba inogona kubudirira kumutsidzira vavakidzani, kufema mweya mutsva mukati mayo, ita kuti ive yakasarudzika uye inoratidze.
Nekuda kweizvozvo, vagari nevashanyi vachawedzera mukana wekuishanyira.
Onawo: Urban kuronga - chii chaizvo?
Diki dhizaini dhizaini - mashandiro
Zvinhu zvakasarudzwa nemazvo zvemidziyo yemumugwagwa, nenzira isingaonekwe, batsira kuchengetedza uye kugadzirisa zvishandiso zvinoshandiswa munzvimbo.
Mienzaniso yakanaka inogona kuva yakadaro machirakuvharira denderedzwa kana rakakura traffic maruva nemaruva.
Panguva imwecheteyo, ivo vanogadzira chishongo uye vanodzivirira mota kubva pakupaka muguta rakarambidzwa kana kudzivirira kupinda kune mukurumbira.
Mumwe muenzaniso werudzi urwu ndevheti yemiti, iyo panguva imwechete inochengetedza bark yavo, inogumira kukuvara, uye inogadzira kurongedza kwakananga.
Nekudaro, fanicha yemumugwagwa iri pamusoro pezvose paki uye mumigwagwa yemigwagwa.
Izvi zvinosanganisira dzakasiyana siyana mabhenji.
Iyo yakawanda midhiya yemhinduro inogonesa kushandiswa kwezvinhu zvakabatanidzwa zvakakwana munzvimbo yakatenderera.
Anonyanya kufarirwa mabhenji emapuranga, asi kazhinji uye kakawanda pane mabhenji esimbi, mune chero ruvara uye chimiro, pamwe neyekuchena mabhenji ebhenji, anenge akafanana neyakavezwa.
Pamusoro pemabhenji, vanoshandisa nzvimbo yemadhorobha zvechokwadi vachafara kushandisa sunbeds, iyo inonyatso kukwana kwete chete pane boulevard, pamhenderekedzo nemvura, asiwo mupaki, yakatarisana nemwaranzi yezuva.
Onawo: Mutemo wekuvaka uye zvidiki zvekuvakisa
Guta Fomu Rokugadzira
Iyo kambani ndiyo inotungamira kugovera zvigadzirwa zvemazuva ano zvemidziyo Guta Fomu Rokugadzira.
Inoshanda zvakananga ne dzimba dzekuvaka uye vagadziri, kuitira kuti vasarudze yakanakisa chimiro uye inoshanda maficha ezvidiki zvekuvakisa zvinhu.
Uyezve, inotsigira Landscape Architecture Association, kuburikidza nekubatana zvakananga, pamwe nekupa izvo zvazvino mhinduro uye zvigadzirwa.
Guta Foramu Dhizaini ndiyo inomiririra yakasarudzika yemakambani eItari akakosha muPoland - Metalco, Bellitalia uye Dhizaini Yeguta.
Metalco - simbi nehuni
Diki rekuvakwa kwedhorobha inyaya iyo iyo kambani yeItaly inonyatsoziva Metalco.
Iyo inopa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa, kunyanya mumapato anotevera: diki yekuvakwa kwebindu uye zvishoma kuvakwa kwemaguta.
Metalco inopihwa inosanganisira yakanakisa mhinduro yekushongedza uye inoshanda kuvandudza kwemapaki, migwagwa, magadheni uye zviteshi.
Metalco inogadzira mabhenji epaki, mabhenji ebindu, mabhenji eguta, mabhenji echiteshi - ese mabhenji ematanda uye esimbi.
Uye zvakare, assortment yekambani ino inosanganisira mabhasiketi emumigwagwa, machira, mabhodhi eruzivo, chifukidzo chemiti, maruva emapaini, mabhasiketi emagetsi, zviputi zvekunze uye dzakasiyana siyana dzemidziyo yemigwagwa: machira, akakodzera pier, boulevard, pamwe nepaki kana yegadheni reguta.
Bellitalia - kongiri nematombo zvinhu
Bellitalia ndeimwe yemakambani anotungamira ekugadzira maEurope dhorobha kongiri yakaunganidzwa uye yakasikwa dombo, inozivikanwa nemhinduro dzayo kune zvidiki zvekuvakisa uye mamiriro ehurongwa hwekuvaka.
Iyo kambani yanga ichishanda kwemakore anopfuura makumi mana, ichizvisiyanisa neyakagadziriswa emhando yepamusoro zvigadzirwa, hunyanzvi uye kugadzirwa kwemazuva ano.
Ficha yemugwagwa mune mapurojekiti Makambani eBellitalia anonyanya kugadzirirwa paki yekrete, gadheni uye mabhenji emaguta. Madhiri mabhenji anowanzo kuve mumwe anoshanda anobaya, achigadzira chairo chifananidzo.
Zvakare, Bellitalia inopa yakawanda kongiri uye nematombo mapoto, kwete chete emaruva ega kana maruva emibhedha, asiwo yemiti yezvishongo.
Mukuwedzera, Bellitalia inorapa in mukugadzirwa kwematsime, zvikwangwani zvinopatsanura kana kudzikamisa traffic pane zvekusimudzira nenzvimbo dzekutamba, pamwe nemabhini akasimba akagadzirwa nekongiri, dombo kana yekutevedzera.
Dhizaini Yeguta - dhizaini yemazuva ano
Zvivakwa zvidiki zvebindu, mabhodhi ekumisa, mabhodhi ezveruzivo mune mamwe mafashoni.
Mabhenji epaki anotarisa-maziso nekugadzirwa kwazvino. Zvinhu zvekushongedza, hari dzemaruva, guruva, matumba emabhazi, kana kudzivisa machira mugwagwa traffic ndeimwe yekambani yemaguta mamiriro ekuvaka zvigadzirwa Dhizaini Yeguta.
Iyo yepamusoro mhando yeguta Dhiza zvigadzirwa inovimbiswa nekuenderera kudzora kwezvishandiso uye matekinoroji maitiro.
Nenzira iyi Dhizaini Yeguta inokwanisa kuvimbisa iwe kusimba kwakasimba kwezvakagadzirwa, pamwe chete nekuteerana nemitemo, chengetedzo, ecology, aesthetics uye mushandisi kunyaradza.
5 / 5 ( 53 mavhoti )
lawn barrierskukiyamaruvamabhasiketi omumigwagwazviteshi mabhenjiMabhenji emugutaBhenji mabhenjiMapaki ebhenjiKanda mabhenji esimbidiki yezvivakwa pakugoveraidiki yemaguta ekuvakwadiki yekuvakwa kwebindudiki yekuvaka zvivakwa mutemodiki yekugadzira yezvivakwazvidiki zvigadzirwa mubindufenicha yemumigwagwavarindi vemitimidziyo yekutambamachirabhasiketi racksmabhodhi eruzivo